Matipi ekugadzira online yekutengesa chirongwa cheecommerce | ECommerce nhau
Matipi ekugadzira yepamhepo kushambadzira chirongwa cheecommerce
Hapana mubvunzo kuti ese mabhizinesi emabhizinesi anoda akaomarara uye akaenzana ekushambadzira chirongwa. Asi zvimwe zvakawanda mumhepo zviitiko zvepamhepo sezvo kwavo kupona kunoenderana kune imwe nhanho. Kubva pane iyo nzira iri yechokwadi chaizvo uye iyo inoteerera kubva panguva yekutanga chikamu icho mune zvemagetsi commerce chakabatanidzwa. Kuti uzviise mukuita nekukurumidza sezvazvinogona.
Kubva pane iyi nzira yakajairika, chirongwa chekushambadzira online ndiyo mhinduro yakanakisa yezve tarisiro yekukura kwebhizinesi redhijitari, chero zvayakaita. Muchirevo chechinyorwa chino tiri kukuyambira kuti iwe ugadzire hurongwa hwehunhu uhwu kuitira kuti ushandire kusimudzira uye kuwedzera bhizinesi rako paInternet. Kubudikidza nezvinodiwa zvakakosha kuti uzviunze kubva ikozvino. Hazvishamisi kuti chimwe chezvinhu zvedu zvekutanga hakusi kusara kumashure kwemakwikwi.
Ehezve, yepamhepo yekushambadzira chirongwa chichava nemhando dzakasiyana mukuremekedza kune zvakajairika kana echinyakare mafomati. Uye ivo vanove avo kwaunofanirwa kufurira kugadzirira kwayo. Izvo hazvisi nyore kana kuomarara mukuzadzikisa kwavo, asi zvinopesana ivo vakasiyana, sezvo iwe uchizokwanisa kuona pazasi. Hazvishamisi, hazvina kufanana kuita chirongwa chekushambadzira chechitoro chemuviri mune zvipfeko zvemitambo pane imwe yekutengesa nharembozha kubva kuchitoro chepamhepo.
1 Yepamhepo kushambadzira chirongwa: vanozivikanwa sei?
2 Zvidiki zvidiki zvechitoro chepamhepo
3 Zvishandiso zvekusvika pakubereka
Yepamhepo kushambadzira chirongwa: vanozivikanwa sei?
Aya marongero ekusimudzira madiki uye epakati-epakati epakati makambani edhijitari anoda chaizvo chaizvo zvido. Iko kwakakosha kwazvo kuti iwe utore mupfungwa kuti bhizinesi chirongwa cheaya maficha chinofanira kutsigirwa neinternet kushambadzira chirongwa. Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kupa uye zvemhando dzakasiyana kubva panguva dzino. Iwe haugone kukanganwa kuti iri zano rinokutendera iwe kuti uzive chaizvo izvo uye nemabatiro atinoda kukwezva nekuchengetedza vatengi kana vashandisi. Ehe, kubva kwakasiyana nzira mukuitwa kwayo.
Kutanga, iwe unozofanirwa kugadzira runyorwa rwezvinangwa zvinogoneka. Iri harisi basa rakaomarara kuita. Kana zvisiri, pane kudaro, chinhu chete chisipo isarudzo yekuchiisa kunze pamwe nekugona. Kuti uite izvi, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuziva zvinangwa zvatinoda kuzadzisa munguva pfupi nepakati. Semuenzaniso, nehunhu hunotevera hwatinokuratidza pazasi:
Kuti izvi zvinoyera zvizere uye zvinogona kuyerwa neimwe nyore.
Iwe unofanirwa kuseta yekubudirira nguva iri yechokwadi chaizvo, pasina chaiwo utopian kana zvisingatombo nyatso kuitika.
Iwe unogona kudzidza kubva kune vamwe vaunoshanda navo kurasa zvimwe zvinangwa zvisina musoro kuita, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti chaizvo hazvigoneke kubva pakutanga.
Ita tsvakurudzo yemusika
Kutaura mhinduro dzinopisa uye dzakakodzera seiyi inotevera: Tichatengesa chii? Ndeapi makuru maficha echigadzirwa chedu? Chii chichaita kuti tisiyane? Iyi mibvunzo inofanirwa kupindurwa nenzira inokodzera kuburikidza neyakareruka, yakaoma uye pamusoro pezvose zvakavimbika zvidzidzo zvemusika. Kufanana nekutanga kukwikwidza kuongorora kuti vako vakwikwidzi chaivo ndiani. Izvo zvinokubatsira iwe kugadzirisa kuita kwebhizinesi redhijitari kubva kune dzimwe nzira dzinoshanda kupfuura mune zvimwe zviitiko. Nebhenefiti yakawedzerwa iyo inokupa iwe iwo maratidziro ezviitiko zvako zvekutanga mudhijitari chikamu.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kubva zvino ndicho icho chine chekuita nekuvandudzwa kwesimba rekushambadzira rakasimba kugadzira dhizaini yekambani yako. Nenhanho dzinotevera iwe dzaunofanira kutora pazasi:
Zadzisa zvinangwa zvine musoro uye zvinokwanisika kubva pakutanga.
Gadzira chiteshi chemagariro ekuenzanisira kwako. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuve uripo pane makuru masocial network aripo izvozvi.
Chengeta taura nevatengi vako kana vashandisi. Mupfungwa iyi, hapana chinhu chiri nani pane kuvatumira zvemhando yepamusoro zvemukati kuitira kuti vaziviswe nezvese zvinoitika muchikamu chako.
Sarudza iyo webhu dhizaini iyo ese inoratidza uye inoshanda. Usakanganwa kuti ndiro gedhi revatengi vatsva.
Kugadziridza kweSEO. Pfungwa inobatsira zvikuru ndeyekunongedza zviri mukati mechitoro chako chepamhepo uye nekudaro zvionekwe mumainjini ekutsvaga apo vatengi vanogona kuwana ruzivo nezve zvemukati mako. Iri zano rekushambadza iro risingatombokundike.
Zvemukati kushambadzira: usakanganwa kuti zvakakosha kupa vatengi vako zvinyorwa zvitsva uye zvakagadziridzwa sezvo Google iri kuwedzera mubayiro wakakura uye zvemukati zvemukati. Kuti iwe uzadzikise zvishuwo zvakamirirwa kwenguva refu, unofanirwa kupa zviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi:
Gadziridza uye uvandudze zviri mukati mewebhusaiti
Vagadzirire ivo pasi pemhando yepamusoro, zvese zvirimo uye odhiyo uye zvinoonekwa zvinhu.
Kuti iratidzwe padiki nepashoma mamwe masevhisi, zvigadzirwa uye zvinyorwa zvinoona nezvekutengesa kwavo.
Bata nemusoro wenyaya unokosha kune vatengi uye vashandisi nechinangwa chekukwezva vamwe vashanyi kuchitoro chako chepamhepo.
Zvidiki zvidiki zvechitoro chepamhepo
Chero zvazvingaitika, une mamwe masisitimu asingazivikanwe, asi izvo zvinogona kushanda zvakanyanya mukuzadzisa zvinangwa zvako mune rako basa rehunyanzvi. Mukupedzisira, mhedzisiro yacho inogona kutonyanya kushamisa kubva munzira dzese dzinogona kuitika. Izvi ndizvo zvimwe zvakakosha izvo zvaunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi.
Gadzira bhajeti iri pamusoro pezvose zviri zvechokwadi uye zvakavimbika. Nepo kune rimwe divi, pamwe ino inguva yakakodzera yekugadzirira chidimbu chehurongwa hweshambadziro rako iro rine pfupiso yezvirimo muchirongwa.
Usave mukuru zvachose, asi pane zvinopesana iwe unofanirwa kutarisa kune yakasarudzwa chikamu. Chero zvazvaive, mbatya dzemitambo, hunyanzvi hwetekinoroji kana midhiya yeruzivo.
Usazvidzidzise-pachako uye kana pane zvinopesana edza kuteedzera mapurojekiti akabudirira mukati medhi yedhijitari iwe yaunopa. Izvo zvinogona kuve pasina mubvunzo imwe yeadiki madiki ekuzadzisa ako anodikanwa ehunyanzvi zvinangwa.
Iwe haufanire kunge wakamira zvakazara mubhizinesi rako kana muchitoro chedhijitari. Kana zvisiri, pane kudaro, zviri nyore kwazvo kuti iwe ugadzirise kune izvo zvitsva zvinodiwa izvo pasina mubvunzo zvinomuka gore rega.
Kana izvo zvaunoda kuti ubudirire mune yedhijitari chikamu, hapana mubvunzo kuti iwe unofanirwa kuve unowedzera kugamuchira mazano matsva uye mazano mukushambadzira kwemazuva ano. Iyo imwe yeakanakisa nzira yekufambira mberi zvishoma nezvishoma.
Kana iwe haungambokanganwa kuti imwe yekiyi dzebudiriro iri mukusimuka kana iwe watadza. Ichi chinhu chakakurumbira kwazvo muchikamu chine simba sedhijitari, icho chiri kuramba chichifambira mberi kuburikidza nemakore.
Zvishandiso zvekusvika pakubereka
Paunenge uri pane imwe, iwe zvakare uine imwe nhevedzano yezviridzwa izvo zvinogona kukubatsira iwe kuvandudza rako redhijitari bhizinesi. Ehezve, kwete chero mutengo, asi kuburikidza neyakaenzana uye zvine musoro nzira. Ivo havana kumbokuvadza mukushandisa kwavo chaiko. Senge mune anotevera kesi atinokufumura pazasi.
Edza nenzira dzose kugadzira runyorwa rwemazwi akakosha, ndiko kuti, vane yakawanda yekutsvaga mavhoriyamu. Kune izvi iwe une akati wandei maficha ayo anozofambisa iri rehunyanzvi basa.
Sezvo iwe uchiziva chaizvo kwazvo panguva ino, unogona kuona dzakasiyana nzira kuita kuti yako webhusaiti ibatsire. Asi pamwe zvimwe zvinonyanya kukosha ndezve Facebook kana Instagram. Kusvika padanho rekuti maviri anotsigira anokubatsira iwe kuwedzera mari kubva panguva yekutanga. Uye zvakare, inokupa iwe kuvimbika kukuru nevatengi kana vashandisi.
Gadzirira yakanaka yekutendeuka kubva ikozvino. Mupfungwa iyi, chikamu chakanaka chekushambadzira kwakabudirira kana nzira dzekushambadzira dzine kupihwa kusingarambwe. Vanogona kusimudzira, kukwezva vatengi vatsva kana kuwana mutengo unokwikwidza.
Iwe unofanirwa kutsvaga yeakanakisa midhiya kuyedza kuchengetedza yakakura nhamba yevatengi kana vashandisi. Ichave iri nhanho inodikanwa yekuwedzera kutengesa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu. Hazvishamisi, mushure mezvose, iyo sisitimu iyo inowanzo kupa nguva dzese mhedzisiro.
Ehe, zvinonakidza kwazvo kuti kugadzira vateereri vakasarudzika zvichienderana netraffic yaunogamuchira pawebhusaiti yako inzira inobatsira zviripo zviripo uye kukwidziridzwa kune chaiwo vatengi.
Imwe nzira isingatombokundikana mune izvi kesi ndeyekutsvaga nyanzvi dzinogona kukubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako zvinodikanwa mubhizinesi rako redhijitari. Zvichida mamwe maziso anoona zvirinani pane rimwe chete uye ichi chinhu chausingakwanise kupotsa kubva zvino zvichienda mberi.
Uye pakupedzisira, iwe haugone kukanganwa chakasarudzika chimiro sezvachinofanira kuva chenguva dzose kubva pakutanga. Iwe unofanirwa kumhanyisa bhizinesi rako kazhinji kazhinji kana uchinyatsoda kuita chimwe chinhu chakakosha muchikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Matipi ekugadzira yepamhepo kushambadzira chirongwa cheecommerce
Maitiro ekuita mari nehukama hweAmazon?
Chii chinonzi SPAM?